Ukwenza njani ukuba ne-Anal Anal Safe
NguSabine Walter, uPierre A. Lehu
I-anus ineziphelo ezininzi zemithambo-luvo, ngoko ke isini ezimpundu sinokuba sisonwabisa kubo bobabini abesilisa nabasetyhini. Oko kwathiwa, kuza nomngcipheko omkhulu. Ukuba ufuna impilo yesondo esempilweni, kuya kufuneka uyazi ukuba ulala kanjani ezimpundu ngokukhuselekileyo. Kuyinyani ukuba akukho mntu wakha wakhulelwa kwisini sangasese-kodwa abaninzi, abantu abaninzi baye bafumana izifo ezithathelwana ngesondo (STDs) ngale ndlela.
Ngapha koko, isondo ezimpundu lithwala umngcipheko omkhulu wokudlulisa izifo ezosulela ngokwabelana ngesondo kunesini sangasese. Ngenxa yokuba i-anus ayenziwanga ukuba ingene, amathuba okwehla kweenyembezi ezincinci aphezulu kakhulu, kwaye loo kuvulwa okuncinci kufana nomatshini owamkelekileyo kwizifo. Iikhondom zinika ukhuseleko, kodwa iikhondom zisengozini yokuqhekeka okanye ukuphuma ngexesha lokwabelana ngesondo ezimpundwini, ke le ndlela yesini ngokuqinisekileyo iyingozi ngaphandle kokuba omabini la maqela akanasifo kwaphela.
Ukuze ulale ngesondo ngokukhuselekileyo, kufuneka ulandele izikhokelo ezithile.
Isikhokelo sokuqala sinento yokwenza nococeko. Injongo esisiseko ye-anus kukugcina into yelindle, ezele ziintsholongwane, ngaphakathi kwikholoni kude kufike ixesha lokuyikhupha. Ngokucacileyo, ukosula nje indawo ngezicwili ezithile akuyi kuzisusa zonke iintsholongwane, ke kufuneka uyihlambe kakuhle loo ndawo.
Zininzi iifolokhwe ezikhoyo ngaphakathi kwi-anus, ngoko ke i-enema ayizukuzisusa zonke iintsholongwane; ke, kuya kufuneka usebenzise ikhondom ngexesha lokwabelana ngesondo ezimpundwini.
Ngenxa yokuba i-anus yayingenzelwanga ukungena ngaphandle, kufuneka usebenzise i-lubricant ukunceda ukugcina izicubu zangasese zingakrazuki.
Ewe kunjalo, awusoze ufake ipenisi kwilungu lobufazi emva kokwabelana ngesondo ezimpundwini ungakhange ususe kuqala (okanye utshintshe) ikhondom.
Ukuxhoma intambo kwitv
vula indawo kwi-pc
zyrtec-d vs ukucacisa-d
iziphumo zecala le-toprol xl
yintoni i-unna boot